Inqwelo yeFama yaseBundarra - I-Airbnb
Inqwelo yeFama yaseBundarra
Itreyini sinombuki zindwendwe onguLauren
Amava awodwa aqaqambayo kwifama yehagu entle yasimahla iBundarra Berkshires, ematyholweni enemveliso yalapha ekhaya ihamper evela kwifama yethu (ibhekoni!) kunye nezinye iifama zasekuhlaleni ezibandakanyiweyo kwisidlo sakusasa okanye sokugoduka. Inqwelo yethu encinci ihonjiswe kakuhle ngamaplanga oqobo kwaye igqunywe ngonyawo loboya behashe. Ibonakalisa uxolo noxolo. Imbono yakho lihlathi elibomvu lentlaka elijikeleze ifama yethu ngefestile yemifanekiso. Zilahle, phumla.
Inqwelo yimbali ekrwada nengangxengwanga, ekuqaleni ibisetyenziselwa ukukhwela itshizi kunye nenyama ngololiwe. Iindonga ezishinyeneyo ezigqunyiweyo zisandi ubungqina bendawo yakho kwaye zikutsalele umva kwizinto ezilula zobomi kunye nobuhle bendalo engqongileyo. Ibhedi yakho ifakelwe ilinen ecikizekileyo kwaye amashiti amakhulu okuhlamba kunye neemveliso zomzimba ezenziwe ngezandla zinikezelwe ukuba zisetyenziswe. Sebenzisa le ndawo ukuze uphumle ngokupheleleyo kwaye uphumle. I-Barham kukuhamba nje iiyure ezintathu ukusuka eMelbourne kunye nekhaya ukuya kuluhlu lwabavelisi bezobugcisa abakumgangatho ophezulu kunye nobuhle bendalo obumangalisayo. Izixhobo zokupheka zisisiseko kodwa zanele ukupheka isidlo sakusasa kunye nokutya okusisiseko kwi-BBQ. Kukho i-microwave encinci ekhoyo kwikhitshi yomsebenzi ekufutshane, ifriji apho uya kufumana khona ukutya kwakho kwasekuseni, i-toaster kunye neketile. Igumbi lokuhlambela lisecaleni kwaye nangona lingatshisi linamanzi ashushu kakhulu. Ezi zizongezo ezisisiseko kwinqwelo eyongeza kumava okuhlala kwifama esecaleni kwehlathi. Ilungele abantwana kunye neentsana, kwaye izilwanyana zethu zasekhaya zinobubele kakhulu. Ifama ifikeleleka lula kwaye sikhuthaza iindwendwe zethu ukuba zizulazule ukuze zibone ukuba ziphila njani na iihagu zethu zoluhlu lwasimahla. Jonga inqwelo yasefama kwi-instagram @bundarra_farm_wagon
4.66 · Izimvo eziyi-75
IBarham yindawo encinci entle ezantsi kuMlambo iMurray apho abamelwane abanelifa leKoonndrook elityebileyo. Ifama yethu ikwiBackroads Trail edibanisa amashishini asefama phakathi kweBarham, iMoama neDeniliquin. Ungaqhuba ngokulula phakathi kweefama kwaye uqhagamshele kumgangatho wobuqu kunye nabavelisi bokwenyani, abadibana kwaye bakubulise kodwa baphinde bachithe ixesha kunye nawe ukwabelana ngebali labo kunye neqhekeza lendlela yabo yokuphila nawe. Ukuhamba ukusuka kwifama yethu ukuya eBarham Avocados, emva koko ungene kwiRestdown Wines ukuze ungcamle kunye nokuthengisa iwayini. Imarike yamafama ikwiCawe yesi-3 enyangeni eRiverside Park.
Kukho iindlela zokuhamba kwihlathi elijikelezileyo laseGunbower State elikwiSiqithi saseGunbower, elaziwa ngokuba yimigxobhozo kunye nezilwanyana zasendle sesona siqithi sikhulu sangaphakathi eOstreliya. Ukuqeshwa kwephenyane ukuhlola kuyafumaneka kwihotele yaseBarham. Ukuloba kwi-Murray kulungile nge-Cod, i-Silver Perch kunye ne-Yellow Belly ibe yeyona nto ibanjiswayo. Njengoko sikhula ukutya okuninzi okumangalisayo kummandla, kukho iindawo ezifana neLong Paddock Food Store, iCanvas Coffee kunye neProvidore kunye neFama 253 apho unokufumana isidlo sakusasa kunye nesidlo sasemini esenziwe ngokutya okulinywe ekuhlaleni.
Singakunika isithinteli ngexabiso elongezelelweyo lokuthatha uhambo lwakho lwemihla ngemihla.
KUBALULEKILEYO: nceda uqinisekise ukuba AKUKHO kwenye ifama ngaloo mini, kwaye unxibe izihlangu ezicocekileyo, nceda UNGAZIZI iimveliso zenyama yehagu kwifama yethu, oku kuyingozi enkulu yokwazisa i-African Swine Fever ebulalayo. Amaxesha amaninzi silapha kwaye xa ufuna nantoni na wamkelekile ukuba uze unkqonkqoze emnyango wethu, kodwa siyakushiya ngoxolo kungenjalo. Sibonelela ngesidlo sasekuseni esibandakanyiweyo ekuhlaleni kwakho nobisi, ibhakoni kunye nejusi yendawo kunye nesonka kwaye sinokudibanisa iziphazamisi zesidlo sasemini ezilayishwe imveliso yasekhaya, iwayini kunye neempahla ngexabiso elongezelelweyo le-100 yeedola. Singabanini bevenkile ethengisa inyama kunye nenyama eBarham kwaye sinokukubonisa ngeenxa zonke njengenxalenye yokuhlala kwakho kwaye siqhuba ukhenketho kunye nokungcamla, kunye neeklasi ze-charcuterie. Nceda uzibhukishe kwangethuba. Ideli ikwagcina inyama yehagu entsha, i-charcuterie kunye nempahla encinci evela kwifama yethu kunye nemveliso yasekhaya kunye netshizi. Sinezinja ezi-2 zokugada i-Maremma kunye ne-Golden Retriever enkulu kunye nenja encinci ye-Tiger, zonke ezinobubele xa sibazisa kwiindwendwe. Sikwanayo nekati yasefama, uMolly. Nceda ungangeni kumadlelo eehagu, ungazondli. Iihagu zinochuku kakhulu kwizifo zabantu kwaye azinakuze zityiswe ukutya kwabantu, umz. iziqwenga njengoko oku kusasazeka izifo.
KUBALULEKILEYO: nceda uqinisekise ukuba AKUKHO kwenye ifama ngaloo mini, kwaye unxibe izihlangu ezicocekileyo, nceda UNGAZIZI iimveliso zenyama yehagu kwifama yethu, oku kuyingozi…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-9136
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Barham